သဘောတား | November 2019
Outlook နဲ့အတွင်း Deleted ပစ္စည်းများ folder ကိုရှင်းလင်းရန်
ယနေ့တွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ကိုကြည့်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှု - ပယ်ဖျက်အီးမေးလ်ဖယ်ရှားရေး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအတူအသုံးပြုသူဖိုလ်ဒါထဲမှာစာပေးစာယူဘို့က e-mail ကိုများစွာနှင့်အက္ခရာများပင်ရာချီသွားနေကြသည်။ တချို့က "Inbox ထဲမှာ" က "Sent", "စာကြမ်းများ" တွင်အခြားနှင့်အခြားသူများထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။
Outlook ကိုအတွက် Mail ကိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အများစုမှာအသုံးပြုသူများသည်ရှည်လျား mail.ru. ကနေမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုခံစားခဲ့ကြ အခြို့သောအသုံးပြုသူများကို Outlook နဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ပိုနှစ်သက်သော်လည်းဤဝန်ဆောင်မှု, မေးလ်များအတွက်အသုံးပြုသူ-friendly ကို web interface ကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း။ ဒါပေမယ့်မေးလ်ကနေသင့်ရဲ့မေးလ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်, သင်မှန်ကန်စွာသင်၏မေးလ် client ကိုပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Outlook နဲ့တစ်ဦးစာတိုက်ပုံး Create
E-mail ကို ပို. ပို. သာမန်မေးလ် forwarding ကို၏ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးနေသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုကနေတဆင့်စာပေးစာယူပေးပို့ခဲ့သောအသုံးပြုသူအရေအတွက်ကတိုးပွားစေပါသည်။ ဤကိစ်စတှငျ, ဒီတာဝန်လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ထားတဲ့အထူးအသုံးပြုသူအစီအစဉ်များ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ပါက e-mail, ရတဲ့နှင့်ပို့ခြင်းကပိုအဆင်ပြေပါစေလိမ့်မယ်။
Microsoft Outlook 2010: အကောင့် Setup ကို
Microsoft Outlook ထဲမှာအကောင့်ကို install ပြီးနောက်, တခါတရံတွင်သင်သည်တစ်ဦးချင်းစီ parameters များကိုထပ်မံညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါစာတိုက် service provider ကအချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလဲနှင့်ထို့ကြောင့် client program တစ်ခုအတွက် setting များကိုအကောင့်မှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာအမှုပေါင်းရှိပါတယ်။ Microsoft Outlook 2010 application ကိုအကောင့်အတွက် setting ကိုအောင်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
အဘယ်အရာကို Outlook နဲ့ထဲတွင်ရှည်လျားတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ဖိုလ်ဒါထဲမှာလုပ်ဖို့
သင် Outlook နဲ့ start အခါတိုင်း, ဖိုလ်ဒါ synchronizes ။ ဒါကမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထပ်တူအချိန်အနည်းငယ်ကြာ, ဒါပေမယ့်လည်းအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သာမကဘယ်မှာအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ သငျသညျပြီးသားထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ကြလျှင်, သငျသညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်သည့်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။
က MS Outlook နဲ့များတွင် Yandex.Mail configure လုပ်နည်း
သငျသညျတက်ကြွစွာမေးလ် Yandex များအတွက် configure လုပ်ဖို့ဘယ်လို, Outlook ကိုသုံးပါနဲ့ Microsoft ကနေ e-mail ကို client ကိုမသိရပါဘူးလျှင်, ညွှန်ကြားချက်များမိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့အလားအလာအတွက် Yandex မေးလ် configure ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ။ အဲဒါကို run - client ကို configuration ကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်ပဏာမခြေလှမ်းများ။
အက္ခရာများပေးပို့ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်း, မေးလ် client ကို Outlook နဲ့အတူလုပ်ကိုင်နေစဉ်တပြိုင်နက်, ဤအစဉ်အမြဲသာယာသောမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျလျင်မြန်စွာစာရင်းတစ်ခုဖြစ်စေလိုအထူးသဖြင့်ပါ။ သငျသညျပြီးသားအလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီ, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအနည်းငယ်သာညွှန်ကြားချက်ထုတ်စစ်ဆေးပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ Outlook ကိုအသုံးပြုသူများသည်ကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရကြောင်းတချို့အခြေအနေတွေမှာကြည့်ပါ။
Outlook ကိုအတွက်အီးမေးလ်များကိုတစ်ဦးလက်မှတ် Add
အလွန်မကြာခဏ, အထူးသဖြင့်ကော်ပိုရိတ်စာပေးစာယူ, အစာလုံးအားမရတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ရာထူးနှင့်ပေးပို့သူရဲ့အမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်သောလက်မှတ်, specify လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာလုံးတွေအများကြီးပေးပို့ဖို့ရှိသည်လျှင်, တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်သတင်းအချက်အလက်များရေးသားဖို့အခါတိုင်းအလုံအလောက်ခဲယဉ်းသည်။
Outlook နဲ့များတွင်အော်တိုအကြောင်းပြန်တက် Set
အဆိုပါ Outlook နဲ့ client ကို၏အဆင်ပြေဘို့အသုံးပြုသူများသည်အလိုအလျှောက်အဝင်မက်ဆေ့ခ်ျတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းပေးထားပါတယ်။ သငျသညျတူညီသောတုံ့ပြန်မှုပေးပို့ဝင်လာသောမက်ဆေ့ခ်ျမှ reply ချင်လျှင်ဒီသိသိသာသာ, e-mail, အတူအလုပ်ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျရွေးချယ်အားလုံးအဝင်နဲ့အများအတွက်အော်တိုအကြောင်းပြန် configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါကသင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသူမတော်တဆမှားလက်ခံရရှိသူထံသို့စာတစ်စောင်ကိုစလှေတျဒါမှမဟုတ်စာတစ်စောင်ကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်မဟုတ်ခဲ့သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေကြုံတွေ့ကြသည်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ကစာတစ်စောင်ကိုပြန်သွားဖို့ကိုနှစ်လိုဖွယ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Autluk အတွက်သင်မသိသောစာကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်။
သငျသညျကို Google ကနေမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သူ၌အလုပ်လုပ်ရန် Outlook ကို configure ချင်ပေမယ့်အချို့သောပြဿနာများရှိခြင်းလျှင်, ဤညွှန်ကြားချက်ကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်ဂျီမေးလ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အီးမေးလ် client ကို configure လုပ်ပြီး၏ဖြစ်စဉ်ကိုဆန်းစစ်။ လူကြိုက်များတဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် Yandex မေးလ်, ဂျီမေးလ်ဆန့်ကျင်, Outlook ထဲမှာ setting တစ်ဦးနှစ်ဦးခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Outlook နဲ့အတူ Sync ကို Google ကပြက္ခဒိန်
သင်တစ်ဦးမေးလ် client ကို Outlook နဲ့သုံးလျှင်သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသား Built-in ပြက္ခဒိန်မှအာရုံစူးစိုက်မှုရယူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသတိပေးချက်များ, တာဝန်များကို, အမှတ်အသားဖြစ်ရပ်များနှင့်ပိုပြီးအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အလားတူစွမ်းရည်ပူဇော်ကြောင်းအခြားဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် Google ကပြက္ခဒိန်တွင်လည်းအလားတူအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
Microsoft Outlook: တစ်စာတိုက်ပုံး Add
Microsoft Outlook အစီအစဉ်ကို e-mail, program ကိုအလွန်သက်သာခြင်းနှင့် functional ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုမှာဤလျှောက်လွှာအတွက်စာတိုက်န်ဆောင်မှုအပေါ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသေတ္တာများဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအဘို့, သူတို့အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ Microsoft Outlook ထဲမှာစာတိုက်ပုံးကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
Outlook နဲ့ password များ Restoring
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင် passwords များကို recover စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုဖို့ရန်ရှိသည်တံ့သောအမှု၌ Outlook နဲ့နဲ့အကောင့် password များမေ့လျော့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးလျှင်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးရုရှားဘာသာစကား tool ကို Outlook နဲ့ Password ကို Recovery ကို Lastic ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူကျနော်တို့ tool ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Microsoft Outlook: ဖိုင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီး
အီလက်ထရောနစ်စာတိုက်ပုံးများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, သို့မဟုတ်စာပေးစာယူတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားသောဖိုလ်ဒါထဲမှာရေးသားခြင်း၏အလွန်အဆင်ပြေမျိုးနှင့်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ။ ဒီ feature ဟာ Microsoft Outlook mail, program ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အသစ်တစ်ခုကို directory ကိုဖန်တီးရန်ဤလျှောက်လွှာကိုထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။ အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့အသစ်တခု folder ကိုဖန်တီးရန်အတွက် Microsoft Outlook နဲ့တစ်ဖိုင်တွဲအတွက်အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
ကြောင့် Microsoft ကကနေလက်ရှိအလုပ်လုပ်တဲ့အီးမေးလ်ဂလိုင်းမှစာလုံးကို pre-defined လက်မှတ်ပေါင်းထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Outlook ကိုအတွက်လက်မှတ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်အခြေအနေများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာကျနော်တို့စာတန်းများကိုတည်းဖြတ်စိတ်ကြိုက်မည်သို့ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သို့ငါ Outlook ကိုအတွက်အကောင့်တစ်ခုကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ E-mail ကို client ကိုအသုံးပြုသူအကောင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့တစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်ရိုးရှင်းသောယန္တရားပေးပါသည်။ အသစ်နှင့်တည်ဆဲအကောင့်အသစ်များ၏ညှိနှိုင်းမှုဖန်တီးအပြင်, ဖြစ်နိုင်နှင့်မလိုအပ်သော၏ဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုယနေ့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကျွန်တော်အကောင့်စကားပြောပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုပါပဲ။ သင်ဤလက်စွဲစာအုပ်ဖတ်နေလျှင်ဒါ, ကသင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကောင့်အသစ်များ၏ဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်လိုအပ်ချက်များကိုဆိုလိုသည်။
အလုပ် Outlook နဲ့ Configuring
ဒါကြောင့်အသုံးမပြုမီလုနီးပါးမည်သည့်အစီအစဉ်ကို, သင်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ရယူနိုင်ရန်အတွက် configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ က MS Outlook နဲ့ - မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်နှင့် e-mail ကိုလိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ဒီနေ့ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းမှု Autluk ဖြေရှင်းပေမယ့်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခု parameters တွေကိုမသာကိုဘယ်လိုကြည့်ပါ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုမစတင်ထားဘူးသည့်အခါနီးပါးတိုင်း Outlook နဲ့အသုံးပြုသူရဲ့အသက်တာ၌ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးဖြစ်ပျက်။ ထို့အပြင်ဤများသောအားဖြင့်ရုတ်တရက်နှင့်လက်ျာအခိုက်မရှိ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်များစွာသောထိတ်လန့်အထူးသဖြင့်အီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိရန်အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည်မှန်လျှင်, စတင်သည်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားအလာ start, သူတို့ပပျောက်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်ကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Microsoft Outlook: ပယ်ဖျက်အီးမေးလ်များ၏ပြန်လည်နာလန်ထူ
အီးမေးလ်များကိုတစ်ဦးကြီးများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါအသုံးပြုသူတစ်ဦးအမှားလုပ်များနှင့်အရေးပါသောစာတစ်စောင်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသုံးပြုသူအနာဂတ်မှာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ပထမဦးဆုံးအရေးမကျော်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သောစာပေးစာယူ၏ဖယ်ရှားရေး, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အီးမေးလ်များကို restore ပြန်ပိုအရေးတကြီးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြစ်လာသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © သဘောတား 2019